ओली हटाउने भारतको त्यो चक्रब्यूँह : नेकपाभित्रै देखियो « Bagmati Online
भारत ओलीबिरुद्ध लाग्नु आधारभुत र तत्कालीन दुबै कारण मजबूत छन । यसबारेमा नेपाली राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने सबैले बुझेको कुरा हो । यो बिषय घाम जस्तै हुदाहुदै किन हाम्रो नेतृत्व अहिले बसिरहेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट सरकारको असफलता देखाउने, सके दुवै पदबाट हटाउने, नसके एक पदबाट हाटाउन कसम खाँदै बैठकमा छलफल गरिदैछ । यसो गर्नमा बाह्य शक्ति र पार्टीभित्रका गुट र उपगुट एकैचोटी परिचालित भएको अनुभूत हुनु दुखद संयोग हो | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार बर्तमान परिस्थितिमा बहुपक्षीय चुनौतिको बीचमा छ । चीन र उत्तर कोरियाबाहेक जनताको बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु त्यति लोकप्रिय छैनन । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय छ । नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्बाचन प्रणालीबाट सुबिधाजनक बहुमतले कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार संचालन गर्नु आफैमा ठुलो कुरा थियो र हो । २१औं शताब्दीमा नेपालले यो बिषय कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
अमेरिकाको अनुदानमा संचालन हुने एमसिसी परियोजनालाई बिबादको बिषय बनाई नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो श्रृजना हुने अबस्था देखिएकोछ छ । यसमा ‘…. सक्यो दैलो देख्यो’ भन्ने उखान चरितार्थ गरिदैछ । नेपाल र चीनबीच कृतिम सिमा बिबाद तब खडा गरिन्छ । जब नेपाल–भारत सिमा बिबाद, सन्धिको पुनराबलोकन र डुवानको बिषय ऊठछ, तब नेपाल चीन सिमाबिबाद तन्किन्छ । चीनलाई बिबादमा तान्निछ ।
यसपटक त यो संसदमा पनि प्रबेश गराउने प्रयत्न भएको छ । नेपाल–चीन सिमा बिबाद भारतीय अतिक्रमणको मुद्दा ओझेल पार्न नियतले गरिएको षड्यन्त्र मात्र हो नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बिगार्ने प्रपन्च हो । यसमा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पारिसकेको छ । यदि समस्या भए दुई पक्ष बार्ताद्वारा हल हुने कुरा चीन र नेपाल सहमत नै छन । पार्टी र सरकारमाथिको चौतर्फी घेराबन्दीबाट मुक्त गर्ने पार्टी सरकार र जनताहरु एकतावद्ध हुनु आजको कार्यभार हो । पार्टी र सरकारको दायित्व हो । लामो प्रतिक्षापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको छ । बैठकको एजेण्डा सार्वजनिक नहुँदै दुई अध्यक्षबीचका बिबाद, बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल र ऊहाँको समुहबद्धता र असुन्तिष्टी बाहिरिएको छ । झन फाइट टु फिनिस हुने गरी लडने जस्ता कुरा बाहरिनु बास्तविक रुपमा दुर्भाग्य हो । पार्टी एकता, कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनताप्रति धोका हो ।
कतै त्यही शक्तिको अभिष्ट पुरा गर्न हामी ऊद्दत त छैनौ ? नेतृत्वले यति कुरा नबुझेको होला भन्न सकिदैन । बुझेको भए किन यतिसारो बैठक बाहिर गुटबन्दी र मोर्चाबन्दी गरिन्छ । पार्टी नेतृत्व किन सबै बुद्दि बिबेकलाई दाउमा राखी ओलीबिरुद्ध उनलाई असफल देखाऊन बाह्य शक्तिको एजेण्डालाई सहयोग पुग्ने गरी बैठकमा प्रबेश नगर्दै अतिरन्जित ढंगले प्रचार गरिन्छ । त्यसैमा केन्द्रित भएर छलफल चलाइन्छ । प्रतिकृयाबादीलाई खुशी पारिन्छ । कसलाई थाहा छैन ? भारतीय शासक गुट ओलीलाई पार्टी र सरकार दुबैबाट हटाऊन चाहन्छ । उस्का दुत बिभिन्न आबरणमा नेपालमा सकृय छन । हो आज भारत कम्युनिष्ट पार्टीलाई कमजोर बनाऊन ओली हटाऊँ आन्दोलनमा नेपालको हरेक ठाऊमा छ, क्रियशिल छ । भारत ओलीबिरुद्ध लाग्नु आधारभुत र तत्कालीन दुबै कारण मजबूत छन ।
यसबारेमा नेपाली राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने सबैले बुझेको कुरा हो । यो बिषय घाम जस्तै हुदाहुदै किन हाम्रो नेतृत्व अहिले बसिरहेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट सरकारको असफलता देखाउने, सके दुवै पदबाट हटाउने, नसके एक पदबाट हाटाउन कसम खाँदै बैठकमा छलफल गरिदैछ । यसो गर्नमा बाह्य शक्ति र पार्टीभित्रका गुट र उपगुट एकैचोटी परिचालित भएको अनुभूत हुनु दुखद संयोग हो । आसा छ, आसन्न बैठकले सबै शंका आशंकालाई खारेज गर्दै पार्टी एकताको बाँकी काम समयमा नै सम्पन्न गरी पार्टीको सबै अगंलाई चलायमान बनाउने अठोट गर्नेछ । सरकारका राम्रा कामको रक्षा गर्दै पार्टी र सरकारको बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम भई आउदा दिनमा आउन सक्ने सबैखाले चुनौती सामना गर्न पार्टी र सरकार सफल हुनेछ ।
तस्वीर जस्तै जिन्दगी पनि बदल्न सक्ने भए सायद मान्छेहरु कहिल्यै दुखी हुने थिएनन होला
आफ्नो मान्छेको कदर समयमै गर किनकि मरेपछि त पराईले पनि दुई थोपा आँशु झारिदिन्छ
सबैलाई प्रेम गर, थोरैलाई विश्वस गर र कसैलाई पनि हानी नगर : विलियम शेक्सपियर
आँसु पनि शब्दहरु जस्तै हो मुखले भन्न नसके पनि बुझ्न सकिने
ढिलो गर्छु तर केहि बनेर देखाउछु, किनकि समयसँगै मान्छेहरु औकात सोध्नेरहेछन, हालखबर होइन !